Vaovao - Nandray anjara tamin'ny valandresaka virtoaly voalohany niaraka tamin'ny ASCC i Ashine
Ashine dia nandray anjara tamin'ny Konferansa Virtual voalohany niaraka tamin'ny ASCC
Amin'ny maha mpikambana vaovao ao amin'ny ASCC avy any Shina azy dia nanatrika ny fivorian'ny ASCC voalohany an-tserasera voalohany tamin'ny 21 Sep 2020 i Jack Wang avy any Ashine.
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivoriana fanao isan-taona ASCC. Raha ny fiatraikan'ny valanaretina, ny fivoriana fanao isan-taona ASCC dia naka endrika ny kaonferansa horonantsary Zoom. Na dia tsy afaka mifampiresaka mifanatrika toy ny mahazatra aza ny olona, ​​fa tamin'ny alàlan'ny fakantsary koa dia nampita ny fahatsapana fiahiahy teo amin'ny samy izy.
Tamin'ny 1 martsa 2020, ny fanamboarana fitaovana diamondra Ashine dia lasa mpikambana ao amin'ny ASCC, midika izany fa afaka mahazo fotoana bebe kokoa isika hananganana fifandraisana sy fifandraisana amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria manerantany, indrindra any Etazonia, izay manome fanohanana matanjaka ho an'ny izahay hanome ny mpanjifa vahaolana fananganana tsara kokoa.
Naharitra adiny telo ny fifanakalozan-kevitra, nifantoka tamin'ny fomba hitarihana tsara kokoa ireo singa mpikambana hanatsarana ny teknolojia fananganana, hampanara-penitra ny fampiharana ny fenitra ara-teknikan'ny indostria, ary hiady hevitra momba ny olana ara-teknikan'ny olana eo amin'ny indostria tamin'ny taon-dasa.
Ashine amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fikosoham-bolo sy ny poloney malaza eran'izao tontolo izao, ny mpamatsy fitaovana diamondra matihanina, raha manana olana mifandraika amin'izany ianao, dia hanao izay fara herinay izahay hanohanana anao amin'ny vahaolana.
Fotoana fandefasana: Mar-05-2021
Kiraro fitotoana beton, Kiraro fanaovana diamondra, Kiraro fitotoana PCD, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Pads polishing vita amin'ny beton,